Ogandà : Miverina amin’ireo tondra-drano be ny mpiblaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Septambra 2007 14:27 GMT
Tena nataon'ny mpiblaogy Ogande ho vain-dohan-draharaha nandritra iny tapa-bolana lasa iny ny mitantara ireo tondra-drano be izay nianjady tamin'ny faritry Afrika ambanin'i Sahara. Tena isan'ny voa mafy tamin'izany tondra-drano izany tokoa mantsy ny faritra Avaratra sy Atsinanan'i Oganda, ka olona 250 no namoy ny ainy ary mihoatry ny 150'000 ireo nitsoa-ponenana.
Tanisain'i Omar Basawad ireo takaitra navelan'ity voina ity izay tsy maintsy hozakain'ity firenena ity mandritra ny fotoana maharitra :
Ny tondra-drano dia manampy ketraka ireo fahasahiranana marobe izay efa mianjady amin'ny Ogandà: ny ra mandriaka vokatry ny ady any Avaratra izay vidiana lafo tokoa, mbola miampy ny HIV/AIDS sy ireo aretina maro ary indrindra ny toekarena izay tsy nety nitraka araky ny nandrandraina. Ankehitriny i Ogandà dia tsy maintsy miatrika indray ny famahanana sy fitadiavana fialofana hoan'ireo traboina aman-jato sy arivony, no sady koa – hanarina sy hanorina ary hanamboatra ireo lalàna, tetezana sy zavatra maro simban'ny tondra-drano. Raha ny mikasika ireo tena voadona mafy tany amin'iny faritra iny kosa, ny toreo sy ny fijaliana dia mbola hitohy ary hihahenjana aza. Mandritra ny fotoana lava; eny elabe aorian'ny hanadinoan'izao tontolo izao fa nisy tondra-drano tany Ogandà tany.
Mpiblaogy maro, isan'izany ry Zack, sy Kelly ary Dennis, no nanambara ny fiarahany miory amin'ireo tra-boina no sady miangavy ireo mpamaky mba hiara-mientana amin'ny fanampiana ireo tra-boina na ara-bola na amin'ny tsy fanadinoana azy ireo fotsiny aza. I Tandra indray dia manazava izay fomba tsotra azo anampiana amin'ny alàlan'ny fandefasana SMS avy amin'ny finday:
Mandefasa SMS mba hanavotra aina iray. Manomeza 1,000/= hoan'ireo tra-boina nohon'ny tondra-drano. Alefaso amin'ny laharana 198 fotsiny ny soratra hoe « FLOOD » [tondra-drano] dia hanampy amin'ny famonjena ireo tra-boina ianao.
I Elitkosa kosa dia mitsikera mafy izay fihetsiky ny fitondrana Ogande manoloana izao voina izao:
Hatramin'ny herinandro lasa, ny vaovao tena dradradraina dia ireo faritra tondra-drano any Avaratra sy any Atsinanana. Miverina hoan'ireo gazety izay namoaka ity raharaha ity ny voninahitra, satria raha tsy izy ireo no nandray andraikitra dia zary lasa fafa-trano asitrika ao ambany tsihy araka ny fomba mahazatra fanaon'ny mpitondra antsika rehefa tsy te ho elingelenina amin'ny olana an-tratra tsy voafehiny izy.
Ary inona kosa no mba navalin'ny Ministera fiarovana amin'ireo voina voa-janahary, izay ambany fiadidian'ingahy Prof. Kiwani ? [FANAMARIHANA: « mpandainga » na « tsy marina » no dikan'ny hoe « kiwani »; satria ny Ministry ny fiarovana amin'ireo voina voa-janahary dia i Musa Ecweru]
« Tokony hamolavola tetik'asa mazava isika mba hifehezana ireo voina voa-janahary ». Oadray, ny voina ve rangahy ity efa an-tratra, no sady efa « alohalika ny ranom-bary » dia ianao mbola migalabona tsara amin'ny sezanao malalaka izay novidiana tamin'ny alalan'ny valin-katsembohan'ireo ray amandrenin'ireto ankizy tra-boina, dia famolavolana tetik'asa no mba hany valiny azonao atolotra !!